यौन/स्वास्थ्य Archives - Gaule News
चितवन । जिल्लामा रहेका ३४८ एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यहाँ रहेका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । एड्स हेल्थ फाउण्डेशनको सक्रियतामा उनीहरुको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । फाउण्डेशन चितवनका प्रमुख कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार बीमा गर्नेमा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाका सङ्क्रमित रहेका छन् । स्थानीय तहहरुले नीति […]
खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था मिलाएको छ । उमेरका कारण स्वास्थ्य संस्थासम्म जान नसक्ने ती नागरिकलाई गाउँपालिकामा कार्यरत अहेव र अनमीमार्फत घरैमा पुगेर स्वास्थ्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको हो । वडा नं ४ डम्बर्खुशिवालयबाट शुरुआत गरिएको गाउँपालिकास्तरीय स्वास्थ्य सेवा परामर्श सबै वडामा पु¥याइने गाउँपालिकाका शाखा संयोजक पवन पोखरेलले […]
दक्षिण दिशामा किन सिरानी बनाउनुपर्छ ? यसको धार्मिक महत्व के छ ? वैज्ञानिक रहस्य के छ ? किन उत्तरतर्फ सिरानी बनाउनु हुँदैन ? उत्तर वा पश्चिमतर्फ सिरानी बनाए के हुन्छ ? अहिले हामीलाई यस्ता कुरा बेकारको लाग्नसक्छ । अर्थात अर्थहिन लाग्नसक्छ । यद्यपी हाम्रा पिता-पूर्खाले भन्दै र गर्दै आए, ओछ्यान बनाउँदा दक्षिण दिशातर्फ सिरानी बनाउनुपर्छ […]
एजेन्सी । स्तन क्यान्सरको पहिलो र मुख्य लक्षण भनेकै स्तनमा गाँठा गुठी हुनु हो । तर, बैज्ञानिकहरुले स्तनमा गाँठा गुठी नदेखिएका महिलाहरुलाई पनि स्तनक्यान्सर हुन सक्ने दावी गरेका छन् । भर्खरै गरिएको अनुसन्धानलाई हवाला दिदै उनीहरुले महिलाहरुलाई गाँठा बाहेकका अन्य लक्षणहरु पनि हुनसक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका बैज्ञानिकहरु स्तन […]
काठमाडौं– विश्व औंलो दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाईदैछ । यसै अवसरमा नेपाल सरकारले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सन् २०२५ भित्र नेपाललाई औलोमुक्त राष्ट्रको रुपमा पुर्‍याउने संकल्प पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सो प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सरकारले ‘औंलो उन्मूलन कार्यक्रम’ देशभर संचालन गरेको जनाएको छ । लामखुट्टे भएका घर, गोठमा […]
काठमाडौं,फागुन ६ — पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभकारी कुरा हो । पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा यसले हामीलाई धेरैथरी रोग लाग्नबाट बचाउँछ । खाली पेट पानी पिउँदा के फाइदा हुन्छ यहाँ हामी बताउनेछौं । १) विषाक्त पदार्थ बाहिर भरपूर मात्रामा पानी पिउँदा शरीरको फोहोर र विषाक्त पदार्थ पसिना र सूसूका रूपमा बाहिर निस्कन्छ । बिहान खाली […]
काठमाडौं, फागुन ६– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि मङ्सिरसम्म गरेको अध्ययनमा एचआइभीको मुख्य जोखिममा रहेका यौनकर्मी महिलाकोे सङ्ख्या दोब्बर वृद्वि भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको अगुवाइमा ४४ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन र ३१ जिल्लामा सङ्ख्या आँकलन गरी गरिएको अध्ययनले महिला यौनकर्मी, तेस्रोलिङ्गी, पुरुष यौनकर्मी, समलिङ्गी पुरुष तथा पुरुषसित यौनकार्यमा […]
महेन्द्रनगर (धनुषा),फागनु ६ – ऐन कार्यान्वयनको माग राखी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रेपछि धनुषालगायत देशभरि हात्तीपाइलेको औषधि खुवाउने तथा पोलियोलगायतका राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम प्रभावित छन् । आन्दोलनका कारण धनुषा जिल्लामा सयौँ बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका छन् । आन्दोलनले ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी सदरमुकाम जनकपुरस्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा फागुन १ गतेदेखि धर्नामा […]
काठमाडौँ,फागुन १ – दीगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी सम्झौता हो । दीगो विकासका १७ लक्ष्य र एक सय ६९ सहायक लक्ष्य छन् । ती लक्ष्यहरु सन् २०३० भित्र पूरा गर्नेगरी तयार पारिएका हुन् । उक्त लक्ष्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका एक सय ९३ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित शिखर सम्मेलनले पारित गरेको हो । ‘दीगो विकास लक्ष्य’मा स्वास्थ्यसँग सम्बिन्धित निम्न […]
काठमाडौं, फागुन ५ – अहिले राजधानीभित्रै कसैलाई आपत परेर फोन गर्‍यो भने भनेको बेला एम्बुलेन्स पाउन मुश्किल छ । भएका एम्बुलेन्सहरु पनि सुविधासम्पन्न छैनन् । एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि कतिपय त भाडाका ट्याक्सी भन्दा खासै फरक छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सहरु भित्र्याउने र सुविधा अनुसार वर्गीकरण गरेर एउटै सञ्जालमा […]
चितवन,फागुन ५- पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्यालाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने ,छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु […]